Laser yekumaka Software EZCAD, Mutongi, Galvo Scanner Musoro - JCZ
ezcad2 uye ezcad3 software inoshanduka-shanduka yemhando dzakasiyana dzekugadziriswa kwemalaser ne laser galvo scanner. inoenderana nemhando dzakawanda dzeraser uye galvo mumusika uye zviri nyore kwazvo kushandisa.
LMC uye DLC2 laser control inoshanda neezcad software, inokwanisa kudzora mhando zhinji dzeraser (FIBER, CO2, UV, Green ...) uye galvo scanner (XY2-100, sl2-100 ...) mumusika.
Yakasarudzika yakasarudzika 2 axis uye 3 axis laser galvo scanner zviripo, kubva kuna stanard kunyatsoita kune ultra chaiyo neyakajairwa kumhanya uye utrl-yakakwira kumhanya. Tsika inogoneka zvakare.
Tiri kupa izere renji ye laser optics dhizaini uye kugadzira senge F-theta scan lens, danda expander, uye inotarisa lens nemhando dzakasiyana dzekupfeka uye zvinhu.
Isu tinounza yakavimbika kwazvo laser sosi, iyo yakaitwa muchaina kana dzimwe nyika pamwe chete nezvimwe zvinongedzo se laser package, ine mutengo unokwikwidza kwazvo.
Tiri kugadzira michina yekugadziriswa kwemalaser yekucheka, kucheka, kudzivisa kudzivisa, kupfekedza ... zvese zvakajairika uye zvakagadzirwa michina.
Hunhu, Kuita, Kudhura-Kunoshanda uye Sevhisi.
Chiitiko chemakore gumi nematanhatu mumunda we laser chinoita kuti JCZ isangova bhizimusi rinotungamira pasi rese rinogadzira uye kugadzira michina yedhizaini yekudhirowa uye zvigadzirwa zvine chekuita nekutakura asi zvakare mutengesi akavimbika wezvikamu zvakasiyana-siyana zvine chekuita nelaser nemidziyo yakagadzirwa uye inogadzirwa nega, pasi, kubata, makambani akadyara mari pamwe nevakabatana navo.
EZCAD2 laser software yakatangwa muna 2004, iro gore rakavambwa JCZ. Mushure mekuvandudzwa kwegore gumi nematanhatu, ikozvino yave pachinzvimbo chinotungamira mune yekumaka laser indasitiri, ine masimba ane simba uye yakasimba kugadzikana. Inoshanda neLMC series laser controller. MuChina, inopfuura 90% yeiyo laser yekumaka muchina iri neEZCAD2, uye kunze kwenyika, chikamu chayo chemusika chiri kukura nekukurumidza kwazvo. Dzvanya kuti uone zvimwe nezve EZCAD2.
EZCAD3 laser software yakavhurwa muna 2015, yakagara nhaka yakawanda yemabasa uye maficha eEzcad2. Iyo ine epamberi software (senge 64 software kernel uye 3D mashandiro) uye laser control (inoenderana nemhando dzakasiyana dzeraser uye galvo scanner) maitiro. Mainjiniya eJCZ arikutarisa kuEZCAD3 izvozvi, munguva pfupi iri kutevera, ichatsiva EZCAD2 kuve imwe yeanonyanya kufarirwa software ye laser galvo kugadzira senge 2D uye 3D laser yekumaka, laser welding, laser kucheka, laser kuchera ...
JCZ 3D laser yekudhinda software mhinduro inowanikwa yeSLA, SLS, SLM, uye mamwe marudzi e3D laser laser prototyping YeSLA, isu takagadzira software inonzi JCZ-3DP-SLA. Raibhurari yesoftware uye nekodhi kodhi yeJCZ-3DP-SLA iripowo. Kune SLS uye SLM, iyo 3D yekudhinda software raibhurari inowanikwa kune system masanganiswa kuti vagadzire yavo yavo 3D yekudhinda software.
EZCAD software yekuvandudza kit / API yeese EZCAD2 uye EZCAD3 inowanikwa izvozvi, Mazhinji emabasa eEZCAD2 neEZCAD3 anovhurirwa masisitimu ekubatanidza kuronga software yakasarudzika yechimwe chikumbiro chakati, chine rezinesi reupenyu.
Laser Resistor Kucheka Machine paTS4410F-C50
Laser Resistor kugera System
Beijing JCZ Technology Co., Ltd, inozivikanwa seJCZ yakavambwa muna 2004. Iyo inozivikanwa bhizinesi repamhepo, rakazvipira kune laser danda kuendesa uye kutonga zvine chekuita nekutsvaga, kusimudzira, kugadzira, uye kusangana. Kunze kwezvigadzirwa zvaro zvepakati EZCAD laser control system, iri panzvimbo inotungamira mumusika zvese muChina nekune dzimwe nyika, JCZ iri kugadzira nekuparadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvine chekuita nemalaser uye mhinduro yezvepasi rese laser system masanganiswa senge laser software, laser controller, laser galvo scanner, laser sosi, laser optics…
Kusvikira gore ra2019, isu tine nhengo zana nemakumi masere nesere, uye vanopfuura makumi masere muzana mahunyanzvi vane ruzivo vanoshanda muR & D uye dhipatimendi rekutsigira tekinoroji, vachipa zvigadzirwa zvakavimbika uye inoteerera rutsigiro rwehunyanzvi.
Yakakwira Hunhu Imwe-Stop Service Yemakwikwi Mutengo
YEMAHARA UNHU ZVEMAHARA
Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa neJCZ kana vadyidzani vazvo zvinosimbiswa neJCZ R & D mainjiniya uye vanoongororwa zvakanyanya kwazvo nevanoongorora kuti vave nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvese zvakasvika kunzvimbo dzevatengi zvine zero zero.
Vanopfuura hafu yevashandi muJCZ vanoshanda seR & D uye mainjiniya ekutsigira ehunyanzvi vanopa rutsigiro ruzere kune vatengi pasirese. Kubva 8: 00 AM kusvika 11: 00 PM, kubva Muvhuro kusvika Mugovera, wako wega Injiniya yekutsigira inowanikwa.
Makwikwi PACKAGE PRICE
JCZ mugovani kana wehunyanzvi mudyandigere pamwe nevatengesi vayo. Ndokusaka tine mutengo wakasarudzika uye mutengo unogona zvakare kudzikiswa kana vatengi vakatenga sepakeji.